mdyleaks – သဂျီး Final | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Gossip, Rumor » mdyleaks – သဂျီး Final
ဇွန်လ၂၉ ဒီပို့စ်တင်တာ ၁၀ရက်လောက်ရှိပြီ၊ မှတ်ချက်များလည်း ရတန်သလောက် ရပြီမို့ သဂျီးအကြောင်း သဂျောင်းအကြီး ပေါင်းစည်း မောင်းတီး ပါတော့မယ်။ မီညောင် မီညောင်……
အများစိတ်ဝင်စားတဲ့ သဂျီး အီရပ်ပြန်ဆိုတာ ဒီလိုပါ။ သူက တခုခုလုပ်ရင် ရိုးအီသွားမှ ရပ်ပြီးပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အီရပ်ပြန်လို့ နာမည်တွင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဝင်တိုက်တဲ့ အီရတ်နိုင်ငံ မဟုတ်တာ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်က အီသွားရင် ရန်လုပ်ပြီးမှပြန်လို့ အီရန်ပြန်တွင်တာပါ။ စကားစပ်လို့ ပြောရရင် သဂျီးကတော်ကတော့ အီသွားရင် ဂျစ်ကြပြီးမှပြန်လို့ အီဂျစ်ပြန် ခေါ်ပါတယ်။ သဂျီးဦးခိုင်နဲ့ကျနော် အသက်ပေးချစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ မြန်မာပြည်မှာရှိစဉ် အသက်ဆိုတဲ့ ဇယားမလေးကို အခကြေးငွေပေးပြီး ချစ်ကြပါတယ်။ (မှတ်ချက် – သဂျီးလူပြိုဘဝတုန်းကပါ၊ အခုတော့ အမဲမှ အသဲ ထင်ပါတော့တယ်) :opps:
၁၉၈၈ခုနှစ် အရေးအခင်း အစောပိုင်းကာလမှာ သဂျီးပါခဲ့တာက ကြောက်-ျီးပါ။ သူများစက်မှုကျောင်းသားတွေ တပ်ဦးရှေ့ဆုံးမှာ သွေးသံရဲရဲ သေကြေဒဏ်ရာရနေချိန်မှာ သဂျီးက ဗိုက်နာနေပါသတဲ့။ ဩဂုတ်လ ၂၈ရက်နေ့ မဆလခေတ် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရုပ်သိမ်းတော့မှ ဝမ်းသွားတာရပ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာာ ၁၈ရက်နေ့ကြတော့တခါ ဗိုက်ပြန်နာလို့ အိမ်အပြင်မထွက်နိုင်ဘူး ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူ ၈၈၈၈အရေးတော်ပုံမှာ သူဆန္ဒပြတဲ့ပုံတွေ ကြည့်လိုက်ရင် အပစ်အခတ်အဖမ်းအဆီး မရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာ နဖူးစည်း၊ လက်မောင်းစည်းနဲ့ အလံကိုင်ပြီး ချီတက်နေတာပါ။ (ပြောရရင်တော့ သဂျီးတယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောစမှတ်တွင်သူ အခြားသုံးဦးလည်း ရွာထဲရှိပါသေးတယ်။ ကြုံလို့ဖေါ်ရရင် အန်တီဝေဆိုသူကျောင်းသူက အရေးအခင်းဖြစ်ကထဲက သူ့မြို့မှာ လူသူ လက်နက်စုဆောင်းမယ်ဆိုပြီး ပြန်သွားလိုက်တာ နောင်သုံးနှစ်အကြာ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ချိန်အထိပါ။ သူ့ကိုဖမ်း စစ်တော့ ကျမဘာမှမလုပ်ပါ၊ အဝေးကနေပဲ စာသင်အံလေ့လာနေပါတယ်ဖြေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖြေဆိုချက်ကို ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်က သဘောကျပြီး အဝေးသင်ပညာရေးစနစ် တီထွင်ပါတယ်။ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် မိခင်ကြီး အန်တီဝေဖြစ်ပါတယ်။ ဦဖက်ဆိုသူရွာသားလည်း စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်း တဦးပါ၊ သူ့ကိုစစ်ကြောရေး ဝင်တော့ တချိန်လုံး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဘူးခံငြင်းပါသတဲ့ ။ ဒီမိုကရေစီကို မထောက်ခံဘူးလို့ ငြင်းတာပါ။ နောက်ဆုံးတဦး ကတော့ မမ ဆိုသူပါ။ အရေးအခင်းတုန်းကတော့ ဆန္ဒပြရောင်ဆောင်ပြီး မြို့ပတ်ရထား အလာကား ……အဲ သူ့အကြောင်းတော့ မသိပါဘူး။
သဂျီးကတော်နဲ့သဂျီး အပျို၊လူပျိုဘဝတုန်းက အိမ်မက်ဆိုတဲ့ စတိုးဆိုင်မှာဆုံပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက မီးပျက် နေလို့ ဖယောင်းတိုင်မီးမှိန်ပျပျအောက်မှာ လူခြင်းမသဲကွဲခဲ့ပါဘူး။ သဂျီးကတော်က မုန့်ဝယ်နေစဉ် အနားက အရက်ဖြူဆိုင်မှာ အမြီးကုန်သွားလို့ မြေပဲလာဝယ်တဲ့ သဂျီးနဲ့ဆုံမိတာပါ။ နောက်တော့ သဂျီးနဲ့ မြို့ထဲမှာ ထပ်တွေ့ပြီး ကျားဆိုးကြီးရဲ့ မာယာကျော့ကွင်းမှာ ရွှေသမင်မလေး ကျဆင်းသွားပါတော့တယ်။ :eek:
သဂျီးကတော် ခါးပတ်နက်ဝတ်ပုံကတော့ ထမီအထက်ဆင်အမဲ ခါးမှာပတ်ထားတာကို ကရာတေးသမား ခါးပတ်နက်တွေနဲ့ မှားတာလို့သိရပါတယ်။ သဂျီးကတော် အောင်ဆန်းကွင်းမှာ အေရိုးဗစ်သွားဆော့တော့ ဂျူဒိုသမားတွေနဲ့ အခန်းခြင်းကပ်လျက်ပါ။ အဲဒီမှာ အဝေးကမြင်သူက လူခြင်းရောသွားပုံရပါတယ်။
သဂျီးက မြန်မာထေရဝါဒ ကမ္မဗုဒ္ဓဝါဒကနေ ပစ္စုပ္ပန်ဗုဒ္ဓဝါဒကို ပြောင်းသွားသူတဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့စာတွေ မှတ်ချက်တွေမှာ အတိအလင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူနဲ့ကျနော် အတိတ်ဘဝမှာ ဆွေမျိုးတော်စပ်ကြောင်းကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက သံသရာမှာ သတ္တဝါတိုင်း မတော်စပ်ဘူးသူ မရှိလို့ ဟောထားလို့ ညီအကိုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပြောရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူကိစ္စက ဒီလိုပါ။ ပုဇွန်တောင်မှာရှိတဲ့ စင်္ကာပူဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သဂျီးလောင်း ခလေးဘဝနဲ့ သင်္ကန်းစီးဖူးပါတယ်။ အဲဒီမှာ သင်္ကန်းတောင်း စာအံစာကျက်လုပ်ရပါတယ်။ :O:
သဂျီးအသားအရည် ဘယ်လိုရှိလည်း မသိရိုးအမှန်ပါ။ အတွင်းသတင်းအရ သဂျီးကတော်က သူ့ကိုချစ်စနိုးနဲ့ ဒါလင်ကျောက်ကျောလို့ နှစ်ကိုယ်ကြားခေါ်ကြောင်း မှတ်တမ်းတော့ရှိပါတယ်။ ကျောက်ကျောဆိုတာ အရောင် အမျိုးစုံရှိလို့ ဘာအရောင်လည် သိရန်ခက်ပါတယ်။ တချို့ကလည်း သဂျီးခဏခဏပြောတဲ့ ကံဆိုတာညာတာ တကယ်မရှိလို့ ပြောတာကို မသဲမကွဲနဲ့ အိုဘားမားအဖေဇာတိ ကင်ညာနိုင်ငံနဲ့ မှားပါတယ်။ 
ပါဝင်မှတ်ချက်ပေး ဖတ်ရှုသူများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း သဂျီးကိုယ်စား ပြောကြားပါရစေ။ ဒီပို့စ်မှာ ရေးတဲ့မှတ်ချက်တိုင်းကို သဂျီးက အပိုပွိုင့် ၅၀၀၊ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသူတိုင်းကို အပိုပွိုင့် ၁၀၀စီ ပေးထားကြောင်း သတင်းကောင်း လက်ဆင့်ကမ်းလိုပါတယ်။ အကယ်၍ site admin > cube point အောက်မှာ အပိုပွိုင့်တိုးထားတာမတွေ့ရင် သဂျီးထံ တင်ပြတောင်းခံနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
ဇွန်လ၂၈ အခုဆို တဦးချင်းမှတ်ချက် ၄၈ဦးရှိပြီမို့ ၅၀ပြည့်ရန် ၂ဦးသာ လိုပါတော့တယ်။ ပြည့်ပြည့် မပြည့်ပြည့် မနက်ဖန် နောက်ဆုံး အပ်ဒိတ်ပို့စ် တင်ရန်ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါပြီ။ ဘကြီးအောင်ပု ဖေါ်မယ်တကဲကဲ ကြိမ်းနေတာကြောင့် တကြောင်းပါ။ အကယ်၍ ၅၀ကျော်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကြောင်ကြီးဓာတ်ပုံ တပုံကိုပါ အပိုဆုအနေနဲ့ တင်ပါမယ်။
သဂျီးကတော်နဲ့ သဂျီးမှာ လူမသိသူမသိ ဇာတ်လမ်းလေး တပုဒ်ရှိပါတယ်။ သူတို့အချင်းချင်း အိမ်မက်ထဲမှာ စတွေ့ကြတာပါ။ အဲဒီတုန်းကထဲက သဂျီးဖြစ်မဲ့ကောင်လေးကို သဂျီးကတော်လောင်းလျာ ကောင်မလေးက တိတ်တခိုး စွဲလန်းခဲ့ပေမယ့် ဝိုးတဝါး အဝေးကနေ မြင်ရတဲ့ ပန်းချီကားလို ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဖူးစာရှိတဲ့အတိုင်း အပြင်မှာ သဂျီးနဲ့ထပ်ဆုံပြီး မေတ္တာနှောင်ကြိုး ရစ်တွယ်မိတာပါ။
သဂျီး အာရ်အိုင်တီ စက်မှုကျောင်းဆင်း တဦးဆိုတာ သူကြွားတဲ့အခါ (ဆောရီးယောင်လို့) ရံဖန်ရံခါ သူမန်းတဲ့အခါ တွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ၁၉၈၈ခုနှစ် မတ်လ ကိုဖုန်းမော် အရေးအခင်း၊ အင်းလျားကန်ဘောင် အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်တော့ သူပါခဲ့တာ ပြောစမှတ်ရှိပါတယ် to be continued !
ဇွန်လ၂၇ ကျနော့်ကို ပွိုင့်ရဖို့အတွက် လိမ်ညာနေတယ်နဲ့ ပြောဆိုကြတာတွေကို မြင်တွေ့နေရတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ပြောလိုက်ပါမယ်၊ ငွေကြေး၊ ဓန၊ ဥစ္စာ၊ စည်းစိမ်၊ နာမည်၊ ဂုဏ်ဒြပ် စတဲ့ပကာသနတွေ မလိုချင်ပါဘူး။ ကြောင်ကြီးမက်တာ အမှန်တရားပါ။ တဦးချင်း မှတ်ချက်ပေးသူ ၄၅ဦးရှိပြီမို့ အချက်အလက် အသစ်တခုနဲ့ မေးခွန်းအချို့ကို ဖြေပါ့မယ်။
သဂျီးဦးခိုင်က ဘာသာပြောင်းထားသူ တဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်ကိုဆိုတာ တဦးချင်းမှတ်ချက် ၅၀ကျော်ရင် မကွယ်မဝှက် ပြောပါမယ်။
မHmee မေးတဲ့ သဂျီးကားမောင်းပြိုင်ပွဲ ကိစ္စမသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာ ပိုရှည်ဆိုတဲ့ ဟာကြီးရှိပါတယ်။ ပြိုင်ကားလား၊ ဒုံးပျံလား မသိပါဘူး။ သဂျီးနဲ့သဂျီးကတော် အတူစီးတာ သေချာပါတယ်။ လမ်းကြုံ အခြားသူကိုလည်း တင်ချင်တင်မှာပေါ့လေ။ ဒါသူ့ကဏ္ဍပါ။ ဝေဖန်စရာ မရှိ၊ မုဒိတာ ပွားပေးပါတယ်။
ဒေါ်မိုးသီတာမေးတဲ့ သဂျီးနဲ့ သမတ အိုဘားမား အမျိုးတော်မတော်ဆိုတာ နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်လို့ ပြောခွင့်မရှိပါဘူး။ ပြောနိုင်တာ ကံညာနဲ့သဂျီး အတော်နီးစပ်ပါတယ်။
ဇွန်လ၂၆ ဖြစ်သင့်တာ ၅၀။ ရထားတာ ၄၁၊ ပြောပြန်ရင်လည်း ကြောင်မင်းလွန်ရာကြမယ်၊ သဂျီးဆောက်တဲ့ အိမ်မှာနေ၊ သူကျွေးမွေးတာတော့ မျိုဆို့နေကြပြီး၊ သဂျီးအကြောင်းကြတော့ အားနာပါနာနဲ့တောင် စိတ်ဝင်စားဟန် မပြုကြဘူး။ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေရက်တဲ့ ရွာထဲက တကိုယ်ကောင်း ငါ့ဖို့သမားတွေကို ပြောပါတယ်။ သဂျီးကျေးဇူးသိတတ်သူများအတွက် တန်သလောက် ထပ်ပြောရရင် သဂျီးအရင်က စင်္ကာပူ ရောက်ဖူးပါတယ်။ တိတိကျကျပြောရရင် စာအံဖူးတာပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ နဲနဲဖွရရင် သဂျီးနဲ့ကျနော် အတိတ်ဘဝတုန်းက ညီအကိုတော်ပါတယ်။ အထောက်အထားလည်း ရှိပါတယ်။ ယုံကြည်မှုနဲ့တော့ ဆိုင်မှာပေါ့လေ။ သက်သေ အထောက်အထားများကိုတော့ တဦးချင်း မှတ်ချက်ပြုသူ ငါးဆယ်ကျော်မှ ထုတ်ဖေါ်ဝန်ခံ ပါရစေ။
ဇွန်လ၂၅(၂) အထင်တော်မလွဲ ဆင်တော်မဆွဲကြပါနဲ့။ ကျနော်ကြောင်ကြီး တကယ်ကို မလိမ်ရဲပါဘူး။ အကုန်လုံး မခြွင်းမချန်ပြောဖို့ကတော့ ၅၀နဲ့ အထက်ရှိမှ ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒါကလည်း ပို့စတင်ကထဲက ပြောပြီးသားပါ။ မလည်ရှုပ်လုပ်ခြင်း မဟုတ်ရပါဘူး။ အခုဆိုရင် မှတ်ချက်စုစုပေါင်း ၈၁ခုမှာ တဦးချင်းအနေနဲ့ဆို ၄၀ ပြည့်သွားလို့ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာတွေ အမှန်အကန်ထပ်ပြောပါမယ်။ ဘောနပ်စ်အနေနဲ့ ကျနော်အကြောင်းပါ နဲနဲပြောပါမယ်။ ၅၀ကျော်သွားတာနဲ့ မရှင်းမရှင်း ရေးထားသမျှအားလုံးကို စိတ်ကျေနပ်အောင် ရှင်းပေးပါ့မယ်။
ဒီပို့စ်ကိုစရေးတော့ သဂျီးနဲ့ရင်းနှီးသူအချို့က ဒီကြောင်ဘာမိုလီု့ ရာရာစစ သဂျီးအကြောင်းကို ရေးရတာလဲနဲ့ မကျေမနပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွာသားအချို့ကလည် ကြောင်ကြီးဂွင်ဖန်တယ် ထင်ပါတယ်။ သဂျီးအကြောင်းကို သူ့မိဘများ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ သူတို့ထက်ပိုသိသူကတော့ သဂျီးကတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးထက်ပိုသိသူကတော့ အသက်ပေးချစ်ကြသူများပါ။ ကျနော်က သာမညကြောင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး၊ အီရန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ သဂျီးကတော့ ပြောထားတဲ့အတိုင်း အီရပ်ပြန်ပါ။ ဒီလောက်ဆို ဘာအားကိုးနဲ့ သူ့အကြောင်းကို ပိုင်စိုးပိုင်နင်း ပြောရသလဲဆိုတာ နဲနဲတော့ ရိပ်စားမိဖို့ သင့်ပါပြီ။
ဇွန်လ၂၅ သဂျီးအကြောင်းပြောချင်တာလည်း ရင်ထဲမှာကားနေတာပဲ။ ရွာသားအများက စိတ်ဝင်စားမှု ထင်သလောက် မပြတော့ခက်တယ်။ မန်းသူစုစုပေါင်း ၇၂ဦးကို တဦးချင်းပြန်စစ်လိုက်ရင် ၃၆ဦးပဲ တကယ်ရှိတယ်။ လေးဆယ်မကျော်ဘဲနဲ့ အကုန်ဘယ်ပြောလို့ေ ကာင်းမလဲ။ ဘဝဆိုတာ အသက်လေးဆယ်ကျော်မှစတယ်ဆိုတဲ့ စကားလည်းရှိသားပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သဂျီးအကြောင်းကို စိတ်ရှည်ရှည် နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ စောင့်မျှော်ပေးသူများကို အားလည်းနာတယ်၊ ခင်လည်းခင်တယ်။ စိတ်မပျက်သွားအောင် သိသင့်တာလေးတခု ထပ်ပြောပါ့မယ်။ လူမပြည့်သေးလို့ တစချင်းထုတ်ပြောရတာ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။
အမေရိကားကို မလာခင် သဂျီး စင်္ကာပူကိုလည်း ရောက်ဖူးပါတယ်။ သဂျီးကတော်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာရှိစဉ် သိုင်းပညာဝါသနာထုံပုံရပြီး ခါးပတ်နက်ပတ်ထားတာ တွေ့သူများရှိကြောင်း သတင်းသိုးသိုးသန့်သန့်ကြားမိပါတယ်။ အတိအကျကိုတော့ ရုံလူပြည့်မှ ပြောပါရစေခင်ဗျား။
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အမှန်တရား လိုလာသူ ပြည်သူ့သတင်းထောက် ဦးကြောင်ကြီး :cool:
ဇွန်လ၂၄ ခွီးထဲမှပဲ၊ မှတ်ချက်ပေးသူများလာလို့ ဝမ်းသာအားရ ကြည့်မိပါတယ်၊ အဘဆွေကစလိုက်တဲ့ အပေါင်းအနှုတ်ကိစ္စတွေ မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ သူများခြံထဲမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေ လာမပွားကြပါနဲ့။ ပြောလို့မရရင် နောက်ထပ်ဒီကိစ္စဆက်ရှည်နေသူတွေကို အနှုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
တဦးချင်းမှတ်ချက်ပေးသူ ၃၃ဦး ရှိပြီမို့ သဂျီးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တခုကို ပြောပါမယ်။ သဂျီးက နယ်နယ်ရရတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အီရပ်ပြန်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကတော့ တဦးချင်းမှတ်ချက် ၄၀ကျော်မှ ပြောပါရစေ။ ဈေးကိုင်တယ် မယူဆစေလိုပါဘူး၊ သဂျီးရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်လို့ အများတောင်းဆိုမှုနဲ့ ဂုဏ်ပြုချင်လို့ပါ။
သဂျီးသမီးအကြောင်း သိလိုသူများအတွက် နဲနဲဆက်ပြောရရင် သဂျီးသမီးက အသားဖြူဖွေးနေပါတယ်။ မိဘတွေနဲ့ မတူပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် သဂျီးနဲ့ပါ။ သူ့အသားအရည်နဲ့ အမှောင်ထုနဲ့ မကွဲလို့ လူအတိုက် ခဏခဏ ခံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရင် သဂျီးအတွက် သူ့သမီးက မပါမဖြစ် အရေးကြီးလှပါတယ်။
ဇွန်လ ၂၃ ပြောပြန်ရင်လည်း ကြောင်မင်းလွန်ရာကြမယ်…မန်းဂေဇက်မှာ ပုံမှန်ဝင်ရေးသူရာဂဏန်းနီးပါး၊ ပင်တိုင်ဖတ်သူထောင်ဂဏန်း၊ အဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာရှိပေမဲ့ ကိုယ်ရပ်ရွာအကြီးအကဲ အကြောင်းကြတော့ စိတ်ဝင်စားသူ ၃၀မပြည့်ဘူး။ အခုချိန်အထိ မှတ်ချက်ပေးသူ စုစုပေါင်း ၄၆ဦးရှိပေမဲ့ တဦးတမဲပြန်ခွဲလိုက်ရင် ၂၉ဦးပဲရှိတယ်။ ဘယ်နှယ်ဗှာ လျှော့ဈေးနဲ့ရောင်းရအောင် ဟင်ရွက်ကန်စွန်းလည်းမဟုတ်၊ မရောင်းပဲထားလို့ ပုပ်သိုးသွားမဲ့အစာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ များများပြောဖို့ သတ်မှတ်ဦးရေ၃၀ပြည့်ရန် ၁ဦးလိုနေသေးသမို့ ရုံဝင်လူစောင့်ရင်းနဲ့ နဲနဲလေးထပ်ပြောပါမယ်။ မေ့သွားမှာစိုးလို့ ထပ်ပြောရရင် လူ၃၀ပြည့်ရင်များများ၊ လူ၄၀ပြည့်ရင် အမှန်အကန်နဲ့ ၅၀နင့်အထက်ဆိုရင် အကုန်ပြောမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
သဂျီးသမီးအကြောင်းကတော့ တန်သလောက်ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ စာဖတ်သူအချို့မေးတဲ့မေးခွန်းများကို ဖြေပါမယ်။
ဒေါ်ပဒုမ္မာမေးတဲ့ သဂျီးအိမ်တန်ဖိုးကိုဖြေရရင် ကြောင်ကြီးက အိမ်မြေအကျိုးဆောင်မဟုတ်လို့ မသိပါဘူး။
WINDTALKER မေးတဲ့ သဂျီးကို ဘယ်မှာမွေးတာလဲဖြေရရင် အင်္ဂါဂြိုလ်မှာမွေး၊ မြန်မာပြည်မှာပျက်၊ ဂျပန်ပြည်မှာပြင်၊ အမေရိကားမှာ ကြီးပွားပါတယ်။
အခြားသူများမေးတဲ့ သဂျီးသမီးအကြောင်း၊ သဂျီးအကြောင်း စတာတွေကို အပြည့်အစုံပြောဖို့ရာကိုတော့ ရုံဝင်လူမပြည့်သေးလို့ သီးညည်းခံကြပါအုံးလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၂၂၊ မနောက်ကြပါနဲ့ဗျာ။ ထောင်တန်တဲ့စကား ရယ်ရင်ပေါ့တဲ့၊ နောက်တယ် ထင်နေကြပါအုံးမယ်။ အခုအချိန်ထိစုစုပေါင်းမှတ်ချက် ၃၁ခုရှိပြီး ၂ခါပြန်၊ ၃ခါပြန် သမားတွေကို တခုစီထားတွက်လိုက်ရင် စုစုပေါင်း တောင်းဆိုသူ ၂၃ဦးရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကတိအတိုင်း နည်းနည်းထပ်ပြောပါမယ်။ ဒီလိုပါ ဒန်တန်တန်….
သဂျီးသမီးက သဂျီးနဲ့သဂျီးကတော်ကနေ မွေးတာပါ။ သူ့တက်နေတဲ့ကျောင်းက အသက်မပြည့်သေးလို့ ပြောခွင့်မရှိပါဘူး။ နာမည်ကိုလည်း အလားတူပါပဲ။ စိတ်မပျက်သွားကြပါနဲ ရွာကာလသားများ၊ ကျန်ပါသေးတယ်။ သူ့နာမည်ကတော့….. မသိပါဘူး။
သဂျီးစီးတဲ့ကားက နောက်ဆုံးပေါ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပေါ်သွားလည်းဆိုရင် သဂျီးကတော်ပိုက်ဆံနဲ့ စိုက်ဝယ်ပေးထားတာပါ။ သူတို့အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ အသံထွက်လာပါတယ်။ ဒီတော့ သဂျီးကတော်ကားလို့လည်း ပြောရင်မမှားပါဘူး၊ နှစ်ကုန်လို့ စိုက်ထားတဲ့ပိုက်ဆံ ပြန်မပေးနိုင်ရင် ကြွေးရှင်သဂျီးကတော်က သိမ်းမှာမိုလို့ပါ။
သဂျီးအလုပ်လုပ်တာတော့ ရုံးဌာနအကြီးကြီးတခုမှာပါ။ ဘယ်လောက်ကြီးလည်းဆို ဒိုင်နိုစော၊ ဂေါ်ဇီလာ၊ ကင်းကောင် သုံးကောင်ပေါင်းတောင် သူ့ရုံးကြီးကြယ်ပုံကို မမှီပါဘူး။ ဒါကြောင် သူဂျီးက အမြဲထောင်ထောင် ထောင်ထောင်ဖြစ်နေလို့ သဂျီးကတော်က မကြာခဏ ဆုံးမရပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးဆိုရင် သဂျီးခင်မျာ ပင်ပန်းတယ် အကြောင်းပြပြီး အလုပ်ကနေ ခွင့်ယူနားနေရပါတယ်။ (စိတ်ကောက်ပြီး မနိုင်နိုင်ရာ မဲတဲ့သဘောပါ)။
၃၀ မပြည့်သေးတော့ သဂျီးကတော်အကြောင်း၊ သဂျီးမင်းရဲ့ ရုပ်ရူပကာ၊ အကျင်စရိုက်၊ လူအများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး စတာတွေ ပြောလို့မဖြစ်သေးဘူး။ သိပ်ပေါသွားမှာ စိုးလို့ပါ။ ရွေဥကြီးပေးပေးနေတဲ့ ဘဲငန်းကြီးကို တခါထဲနဲ့ ချက်မစားရက်ပါဘူး..
ဇွန်လ ၂၁၊ မှတ်ချက်ပြုတောင်းဆိုသူ အများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယခုအချိန်ထိ ကွန်းမန့်ပေါင်း ၂၁ခုရရှိပြီး ကင်း၊ ဆူး၊ မဝေ၊ မမ လေးယောက်က နှစ်ခါစီ မန်းထားလို့ ခိုင်လုံတဲ့မဲ စုစုပေါင်း ၁၇ခု ရပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာတော့ ငါက ကြက်ဖွတ်အစိုးရထက် အပုံကြီး သမာသမတ်ရှိတယ်ကွ)။ ဒီတော့ ၂၀မပြည့်လို့ ကတိအတိုင်း နည်းနည်းပြောပါမယ်။
သဂျီးနာမည်က တနင်္လာနဲ့ အင်္ဂါနံ ကျားနဲ့ခြင်္သေ့ပေါင်းစပ်ထားတာပါ။ Liger သို့မဟုတ် Tigress ကြောင်ကြီးမျိုးနွယ်အုပ်စုဝင် တဦးဖြစ်ပါတယ်။
နေရပ်ကတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အာကားဒီးယားကောင်တီ ဟိုလမ်း အိမ်အမှတ် ဟိုဒင်းမှာပါ။
လူပြိုများအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းကောင်းကတော့ သူမှာသမီးချောတယောက်ရှိပါတယ်။ အသက်က…..အင်း ရေးဖို့ တောင်းဆိုသူတွေကလည်း ထင်သလောက် မများဘူးဗျာ။ စိတ်မဝင်စားကြဘူးနဲ့တူတယ်။ သူများသမီးပျိုအကြောင်း ကျန်ာပြောလို့ ပရိုက်ဗေစီ ချိုးဖောက်မှုနဲ့ တရားအစွဲခံရရင် ဒီပရိတ်သတ်နဲ့ တွက်ခြေမကိုက်သေးဘူး။ ပြောချင်တာတော့ ရင်ထဲအပြည့်ပါပဲ
ရွာအကြီးအကဲ အုပ်ရှောင် သဂျီးမင်းအကြောင်း မသိချင်ကြဘူးလား၊ သူက ကိုယ်ဖျောက်တာ တော်လွန်းတော့ နတ်လိုလို သိကြားလိုလို မှတ်သူတွေ မှတ်နေကြတယ်။ ကျနော် သူ့အကြောင်းသိထားပေမဲ့ စိတ်ဝင်စားသူ မရှိဘဲ ထုတ်ပြောရန် မသင့်လို့ ငိုချင်လျက်လက်တို့ ဖြစ်ချင်နေပါတယ်။ ကွန်းမန့်ပေး တောင်းဆိုသူ ဆယ်ဦးခန့်ရှိပါက နည်းနည်းပြောမယ်၊ နှစ်ဆယ်ပြည့်ပါက ပိုပြောပြမည်၊ သုံးဆယ်ရှိလျင် များများပြောမည်၊ လေးဆယ်ဆိုပါက အမှန်အကန်ပြောမည်၊ ငါးဆယ်နှင့်အထက်ဆိုလျင်တော့ အကုန်ပြောမည် ဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျား…
သောက်ကျိုးနဲ့တော် တော်တီးတီးတော်သြော ရွာသားအပေါင်း၏ ပြန်ကြားချက်ကို စောင့်မျှော်လျက်
ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ မတွက် မစဉ်းစားဘူးအဆိုကိုခြေဖျက်ဖို့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ က ကိုကြောင်ကြီး ပွိုင့်တိုးစေရန်အလို့ငှာ ၀င်မန့်နေကြတာနော် . . သဂျီးအကြောင်းချင်တာလဲပါတာပေါ့လေ ပြောတော့ နော ပွိုင့် ၅၀၀ ရရင်
သဂျီးကရော ကြောင်ကြီးရဲ့ update ကို စိတ်ဝင်စားရဲ့လား .. တကယ် ၀င်ဖတ်သလား ..
မလွှဲမရှောင်သာ ၀င်ဖတ်တာလား ..
အဲဒီအချက်ကို စိတ်ဝင်စားတယ် ..
နောက်ပြီး သဂျီးက အိုဘားမားရဲ့ မိန်းမနဲ့ ဆွေမျိုးနီးစပ် ရှိတယ်လို့ ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း ကြားဖူးတယ်
(ဟုတ် မဟုတ်) ဟုတ်ရင် အသားဖြူဆေး ရောင်းချင်လို့
၀င်ပြီး အားဖြည့်လိုက်ပြီ ကိုကြောင်ကြီး 50 ပြည့်သွားအောင်။ သဂျီးဆောက်တဲ့ အိမ်မှာနေ၊ သူကျွေးမွေးတာတော့ မျိုဆို့နေကြပြီး၊ လို့တော့အပြောမခံနိုင်ဘူး
ကိုကြောင်ရေ ပွိုင်.၅၀၀ တော့ရပါပကောလား :-) :-) :-)
အင်းးးးးးးးးးကိုကြောင်ကြီးထက်ပိုပြီး သဂျီးကို သိတဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင် အံ့သြကြလေမလား။ သဂျီးကို တီဗွီ အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ သဂျီးမှာ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ဆင်းဖို့ လေယာဉ်ကွင်း ရှိတယ် ဆိုရင် ယုံကြလေမလား မသိ။
အင်း ….. ခက်တော့နေပြီ … သူကြီးအကြောင်း ကောလဟာလတွေများလာတော့လဲ မနေနိုင်တော့ဘူး … ကျွန်မနဲ့ သူကြီးက ဆွေမျိုးတော်တယ် … သူကြီးက ရှောင်လင်သိုင်းတတ်တယ်ဆိုရင် ယုံကြမလားတော့မသိဘူး ..
သဂျီးက ရှောင်လင်သိုင်း တတ်လား မတတ်လားတော့ မသိဘူး
ရှောင်နေတာ ခုချိန်ထိ ပေါ်မလာသေးဘူး
သိချင်တော့လည်း ၅၀ပြည့်ရာပြည့်ကြောင်း ထပ်လောင်း၍……
အောင်ကြူး ကလဲ မန်းမအားလို့ ချောင်းပဲကြည့်နေရတာကို
ဈေးကိုင်နေပြန်ပါကောလား ဟိုမဲပေးတဲ့ ပိုစ့်မှာလဲ သဂျီးရင်တုန်ပီးသွားပီ ခုလဲ သွေးတိုးနေမလားမသိဘူး
ဘယ်နေပြောမှာလဲ တိတိကျကျပြော အဲ့နေ့ဒီ Page ကိုထပ်လာဖတ်မယ် ;)
ခုထိဆို သဂျီး အသား က အနက်နုနု ရယ် သမီးလေးရှိတာရယ် RIT ကပြီးတာရယ် Singapore Master (or Diploma) ရတာရယ် ဘာသာပြောင်းတာရယ် ယောကျာင်္းကောင်းပီသတာရယ် ( ဆရာချစ်ဦးညိုက ယောကျာင်္းကောင်းတို့ မြီသည် မိန်းမကို ကြောက်ချင်ဟန်ဆောင်ရတယ်တဲ့) သိပြီးပြီ။
ကျွန်တော်ကတော့ သူကြီးအကြောင်းထက် ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပိုသိချင်နေမိတယ်။ MG ကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှုနေတဲ့ member အရေအတွက်ကိုများ ဖေါ်ထုတ်ချင်နေတာလားလို့…
active member အရေအတွက်ကိုတော့ ခန့်မှန်းနိုင်သွားပါပြီ။
မနေ့က… ၂၄နာရီ(၁ရက်)အတွက်.. စုစုပေါင်းပွိုင့်ပေးတာဟာ.. ၁၂၄၁၅ ကျပ်ရှိပါတယ်..။ ပွိုင့်ပေးစံနစ် ပြန်ချိန်ဆနေပါတယ်..။
visitor အရေအတွက် ကို ဘယ်လိုများတွက်သလဲ မသိဘူးနော်၊ IP နဲ့ count လုပ်သလား၊ Hit rate နဲ့တွက်သလားမသိဘူး၊
IP နဲ့ တွက်တာဆိုရင် Gateway တစ်ခုတည်းက ဖြတ်ထွက်ပြီး သုံးရတဲ့သူတွေအတွက် အရေအတွက် မှန်ပါ့မလား၊
Hit rate နဲ့ တွက်တာဆိုရင်တော့ connection ကျလို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ခေါ်ရတာတွေ၊ comment တွေ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ဝင်ဖတ်တာတွေကြောင့် visit count တွေ များနေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ visitor အရေအတွက် နဲ့ visit count အရေအတွက် အတူတူပဲ လို့ သတ်မှတ်ထားတာလား။
myanmar.exchange က သူတို့ဆီက ရွှေဈေး၊ ဒေါ်လာဈေး၊ FEC ဈေး မေးတဲ့သူတွေဆီက တခါစုံစမ်းရင် (၁) ကျပ်ကောက်ဖို့ စဉ်းစားနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တနေ့တနေ့ သူတို့ account တွေဆီကို online inquiry လုပ်တဲ့သူ အရေအတွက်က လက်ရှိအနေအထား မှာတောင် တသိန်းလောက်ရှိပါသတဲ့။ ဒီတော့ MG လဲ point ပေးစနစ် ပြန်သုံးသပ်တာ ကောင်းပါတယ်။ မဟုတ်ရင် MG က Bankruptcy ကြေညာ လိုက်ရလိမ့်မယ်နော်။
သဂျီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်ဆို သေချာ စောင့်ကြည့်ရမယ် မဲပေးသင့် မသင့်။
ညောင်နှစ်ပင် အစည်းအဝေးကဲ့သို့ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း…
အမြှီးရှည်ရှည်နဲ့ ကြောင်တစ်ကောင်ပုံတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်။
ဒါနဲ့ဦးကြောင်ကြီးရေ..mdyleaks ကသူကြီးနှင့်မိသားစုအကြောင်းပဲ သီးသန့်လားရှင့်
ဟိုLeaksလိုမျိုး အစုံ(ရွာထဲမှာ ဦးကြောင်ကြီးသိသမျှ) မဖော်တော့ဘူးလားလို့…??
စာတွေ ဖျက်ထားတာလား ဘာစာမှ မရှိတော့ဘူးနော်။
သဂျောင်း အကြီး သဂျီး အကြောင်း ပိုစ်တော့ ဟတ်ခံရတာ သေချာ နေပြီ..
ဘယ်လို ကြည့်ကြည့် စာ မတွေ့တော့ဘူး။
ဘာမှမမြင်ရသောကြောင့် ၂ခါ ပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်။
ဒါလည်း ဘာမှမပေါ်ဘူး အောက်က ကွန်းမန့်မှာကျမှ ဘ၀တူတွေတွေ့တော့တယ်။
သူကြီးသည် လာမည့်နှစ်တွင် အမေရိကန်သမတလောင်းအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်း
သူကြီးနှင့်သိသည့် မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သတင်းအတိအကျရထားပါသည်။
ကိုကြီးကြောင်ကတော့ တော်ပါ့ .. အကွက်ကျကျနဲ့ အမှတ်တွေယူသွားလိုက်တာ သူကြီးတော်တော်လန့်သွားပုံရတယ် …
အခု အမှတ်တွေ ပြန်လျော့ပြန်ပြီ … ကွန်မန့်တွေအတွက် အမှတ်ပေးမတိုးတော့ဘူး …
သဂျီးက ကျန်းမာရေး ခြူချာတယ် ထင်တယ်နော်..
အရေးကြုံရင် နှာစေး တတ်တော့ အရေးအခင်းလို အကြီးအကျယ် ဆိုတော့ ဗိုက်နာတာ မဆန်းပါဘူး။
အခုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ကွန်မန့်တစ်ခုကို ၅ မှတ် ပြန်ပေးနေပြန်ပြီ ..
တစ်နေ့တစ်မျိုး အမျိုးမျိုးပဲ …
အီရန်တွေရော အီရပ်တွေရော အီဂျစ်တွေရော
site admin > cube point အောက်မှာ အပိုပွိုင့်တိုးထားတာမတွေ့ပါဘူး
ပြီးသွားတော့လဲ တစ်မျိုးကြီးဘဲ နော်။
အစုံဖတ်ချင်ပါတယ်ဗျို့ … ကိုကြောင်ကြီး….
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း နဲ့ မျက်စေ့ ကော နားပါ လည်သွားပါတယ် ကိုကိုကြောင်ရေ………..
ကျနော် ပျင်းပျင်းရှိတိုင်း …
၀င်ဝင်ဖတ်ပီး ပြုံး-ရယ်-ဟား ရသော ပိုစ့်ဖြစ်ပါသည်…။
အနော့် ယောက္ခမလောင်းဂျီးပါ.. သူ့သမီး အနော့ခြစ်ခြစ်လေးနာမည်က သံစဉ်ခိုမ်လို့ ခေါ်ပါတယ်..။